Kutumirwa kweiyo iPhone 13 kunosvika mazuva ekuendesa pakati paGumiguru 19 ne26 | IPhone nhau
Kana isu tave pedyo nekusvika pavhiki kubva pakaunzwa iyo nyowani iPhone 13, iPhone 13 Pro uye iPhone 13 mini mamodeli matura eaya anoramba achienda kure nekutumirwa nekukurumidza, asi izvo zvinopesana.
Pawebsite yeApple tinogona kuona kuti mhando dzakakumbirwa zvakanyanya sezvazviri ndidzo dzinoiswa. Mienzaniso iyo ino nguva inowedzera iyo 128 GB yekuchengetera kwemukati uye kuti mune zvimwe zviitiko zviripo zvekuunganidzwa muchitoro zuva rinoteera iro richagamuchirwa nezviuru zvevashandisi pasirese, musi waGunyana 25.
Kununurwa pamba pakati paGumiguru 19 kusvika 26
Chii chinoita kuti yakawanda yeiyo iPhone 13 iwanikwe izvozvi ndeyekuti kununurwa kunoenda pakati paOctober 19 na26. Mupfungwa iyi, hachisi chinhu kunze kweyakajairika kuona idzi nguva dzekutakura dzichitarisa mamiriro azvino ezvinhu, asi isu tinofanirwa kutaura kuti manzwiro ekutanga aive ekuti vaizove nesheya yevhiki inotevera ... Zvinoita sekunge handizvo uye vashandisi vanotenga izvozvi vachatofanira kumirira kwenguva yakati rebei kana pinda navo zvakananga nesarudzo yekutora chitoro, nguva dzose nekugadzwa.
Sezvo mune kumwe kuburitswa kweApple, pekutanga chinodikanwa chakakwirira uye kana isu tikasakurumidza kana vachinge vatengesa saka tinofanirwa kumirira nguva yakareba kuti tigamuchire mudziyo wedu. Mune ino kesi, kutumirwa kunogona kutambura zuva shanduko mushure me zuva rekutanga remusi iri iro rinotevera Chishanu, Gunyana 24.
Kubudirira kweiyo nyowani iPhone 13 mamodheru kwakavimbiswa uye kunyangwe Apple isingaratidze zviri pamutemo kutengesa nhamba mumusangano wayo nevane masheya, zvine chokwadi chekuti mamwe makambani ekuongorora anoverenga zvakatumirwa uye tinogona kuisa anofungidzirwa nhamba dzenhare dzakatengeswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kutumirwa kweiyo iPhone 13 kunosvika mazuva ekuendesa pakati paGumiguru 19 ne26